You searched for प्रभु टिभी - Tech News Nepal Tech News Nepal
काठमाडौं । साफ च्याम्पियनशिप फुटबलअन्तर्गत आज नेपालले उपाधिका लागि चिरप्रतिद्धन्दी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । नेपाली समयअनुसार साँझ ८ः४५ देखि सुरु हुने खेल नेपालका लागि इतिहास बनाउने सुवर्ण अवसरसमेत हो
Published On : 16 October, 2021
काठमाडौं । डिशहोम र प्रभु टिभी एक आपसनमा गाभिने पक्का भएको छ । डाइरेक्ट टु दी होम (डीटीएच) तथा डिजिटल टेलिभिजन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका यी दुई कम्पनी मर्ज भई
काठमाडौं । डिशहोम र प्रभु टिभी एक आपसनमा गाभिने भएका छन् । डाइरेक्ट टु दी होम (डिटीएच) तथा डिजिटल टेलिभिजन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका यी कम्पनी मर्ज भई एउटा ब्राण्डको
Published On : 18 April, 2021
डिशहोममा गाभियो प्रभु डिजिटल, अब टिभी र इन्टरनेट एउटै ब्राण्डमा
काठमाडौं । डिशहोम र प्रभु टिभी एक आपसमा गाभिएका छन् । डाइरेक्ट टु दी होम (डीटीएच) तथा डिजिटल टेलिभिजन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका यी दुई कम्पनी मर्ज भई एउटै ब्राण्ड
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक प्रभु डिजिटलले ग्राहकका लागि नयाँ अफर ल्याएकाे छ । यसअन्तर्गत कम्पनीकाे इन्टरनेट सेवा सुचारू गर्दा ग्राहकले जडान खर्च, राउटर, फाइबर र आईपी टिभीका लागि अतिरिक्त शुल्क
Published On :3March, 2021
प्रभु पेमार्फत ग्यापुको भुक्तानी गर्दा ओटीटी टिभी निःशुल्क, साथमा १० प्रतिशत क्यास ब्याक
काठमाडौं । दशैंमा ग्यापुमा सामान किन्ने हरेक उपभोक्ताले एक महिनाको सब्सक्रिप्सन सहित ओटीटी (मोबाइल टिभी) नि:शुल्क प्राप्त गर्ने भएका छन् । ग्यापुमा शपिङ गर्ने उपभोक्ताले प्रभु पेको मोबाइल वालेटबाट पैसा
ओटीटी प्लेटफर्म ‘ओहो! मुभिज’ र प्रभु पेबीच सहकार्य, अनलाइनबाट टिकट काटी नयाँ फिल्म हेर्न सकिने
काठमाडौं । कोरोना महामारी कारण लामो समयदेखि सिनेमा हलहरू खुल्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कतिपय फिल्महरू विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत रिलिज भइरहेका छन् । जसको एउटा उदाहरण भारत हो ।
प्रभु पेबाट पैसा तिरी यसरी हेर्नुहोस् ‘ओहो ! मुभी’ मा नयाँ चलचित्र
Published On :4August, 2021
लस्कर फुड्सका खानेकुरा प्रभु पेबाट अर्डर गर्दा स्मार्टफोन जित्न सकिने
काठमाण्डौं । प्रभु पे डिजिटल वालेट र अनलाइन फुड डेलिभरी प्लेटफर्म लस्कर फुड्सबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । हालै सञ्चालनमा आएको लस्कर फुड्सले ‘हाइजेनिक किचन’को अवधारणालाई अगाडि बढाएर रेष्टुरेण्टबाट
कहिलेसम्म आउला सिजी नेटको आईपीटिभी ?
काठमाडौं । हालैमात्र सञ्चालनमा आएको सिजी नेटले आफ्नै आईपी टिभी सेवा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । हाल अप्टिकल फाइबरमा इन्टरनेटसँगै आईपीटिभी समेत उपलब्ध रहेको बजारको अभ्यासलाई सिजीले समेत पछ्याउने भएको
२०७८ वैशाख २९, नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवाप्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेट प्रा. लि.ले क्लियर टिभीको मुभी अन डिमाण्डमार्फत सलमान खान अभिनित ‘राधे’ प्रसारण गरेको छ ।
काठमाडौं । प्रभु डिजिटल अन्तर्गत सञ्चालित प्रभु टिभीले ग्राहकलाई लक्षित गर्दै नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा टेलिभिजन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको प्रभु टिभीले सस्तो मूल्यमा टेलिभिजन
Published On :2March, 2021